Jesosy Mamonjy Ankorondrano: misy mikasa hanokatra ny fiangonana, rahampitso | NewsMada
Jesosy Mamonjy Ankorondrano: misy mikasa hanokatra ny fiangonana, rahampitso
Mihejan-droa ny tady ao amin’ireo mpino kristianina ao amin’ny fiangonana Jesosy Mamonjy Ankorondrano. Misy andiana mpino mikasa hanokatra amboletra ny fiangonana rahampitso. « Manoloana izany, nampahafantatra ny mpikambana ny filankevitra voafidy tamin’ny fivoriambe fa tsy mbola misy mihitsy ny fifanarahana ho famahana ny disadisa nitranga teo anivon’ny fikambanam-pivavahana Jesosy Mamonjy », hoy Ranaivoarisoa Gilbert, mpikambana eo anivon’ny filankevi-pitantanana. Nambarany fa nisy nangataka manokana ny depiote Naivo Raolidinina ho mpanelanelana ny raharaha fa tsy niera nialoha amin’ny samy mpikambana ny filankevi-pitondrana.
Tsiahivina fa nakaton’ny fanjakana, ny 17 marsa teo, ity fiangonana ity taorian’ny fifampikasihan-tanana teo amin’ireo samy mpino sy ny fanimbana ny fitaovam-piangonana. Tranga niseho taorian’ny fifidianana ny ho filoha vaovao hitantana ny fiangonana ny 7 febroary teo.
Nilaza ny depiote fa tsy miditra amin’ny raharaham-piangonana ny fanjakana ary miangavy ny fanjakana hijery akaiky ny raharaha. « Amin’ny finiavana hamoha ny fiangonana raha tsy misy ny fifanarahana mazava an-tsoratra voasonian’ny mpikamban’ny filankevi-pitondrana », hoy hatrany Ranaivoarisoa Gilbert.
“Tsy mazava ny rakitra sy ny ampahafolon-karen’ny fiangonana. Tsy voaloa ny vidin-jiro mitentina 17 tapitrisa Ar, maro ny fitantanana tsy mazava ka matahotra raha ny pasitera Randrianantoandro Raymond ny ho mpisolo toerana vonjimaika hitondra ny fiangonana”, hoy hatra ny fanazavana avoaray. Mandà tanteraka ny fanerena azy ireo handray ny sori-dalana mivaona amin’ny sata sy ny fitsipiky ny fiangonana koa ireo mpino. Araka ny fantatra, hiambina eny Ankorondrano ny mpitandro filaminana rahampitso. Andrasana ny tohin’ny raharaha.